I-Grandview Cottage 2 Berry - I-Airbnb
I-Grandview Cottage 2 Berry
Indlu encane ibungazwe ngu-Yolanda
I-Grandview Cottage No 2 iyikotishi elikhulu elinamagumbi amabili elinekhishi eligcwele kanye nezindawo ze-BBQ zangaphandle. Kukhona umpheme omkhulu onetafula nezihlalo ezibheke ngaphandle kweKangaroo Valley emangalisayo nangale kwayo. Kokubili igumbi lokulala negumbi lokuhlala linokubukwa kwentaba okumangalisayo. Ikamelo lokulala liwubukhazikhazi futhi linendlu yokugezela eyi-ensuite. Kukhona nombhede ongu-Queen Sofa onomatilasi we-innersprung wabantu abadala abangu-2 abengeziwe.
Kuhlinzekwa wonke amalineni namathawula okugeza.
Sine-Chicken Coop esebenzayo futhi ungajabulela amaqanda ethu amnandi ekudleni kwakho kwasekuseni. Lapho uju lwethu lugeleza kuzoba khona ongakuzama futhi. Noma ungase ufune ukuthenga uju ozohamba nalo.
Amakotishi ethu atholakala imizuzu eyi-10 ukusuka eKangaroo Valley naseNowra kanye nemizuzu eyi-15 ukuya eBerry.
Kukhona amathilomu amaningi nezindawo zokudlela endaweni yangakini kanye nezivini ezinewayini elihle kakhulu.
Kukhona ukugibela amahhashi kanye ne-kayaking e-Kangaroo Valley namabhishi amahle imizuzu engama-35 ukusuka kumakotishi ethu.
Sinikeze ifayela lemisebenzi endaweni yasendaweni ukusuka eJamberoo ukuya eJervis Bay. Kukhona amathikithi esaphulelo nokunye okuningi okufanele ukwenze! I-Cambewarra Cafe iqhelelene nendlwana futhi badla isidlo sasekuseni nesasemini nsuku zonke.
Sinikeze ifayela lemisebenzi endaweni yasendaweni ukusuka eJamberoo ukuya eJervis Bay. Kukhona amathikithi esaphulelo nokunye okuningi okufanele ukwenze! I-Cambewarra Cafe iqhelele…